प्यारो मान्छे तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना - Saugat's Blog
त्यो परिचय त्यति मै सिमित रह्यो म अध्यक्ष, तिमी उपाध्यक्ष अनी अरु साथीहरु अरु अरु पदमा । चलि नै रह्यो यात्राहरु आफ्नै गतीमा, आफ्नै रफ्तारमा । जती जती समय अघि बढ्दै गए परिस्थितीहरु फरक हुँदै गए । हुन त पहिले पनि परिस्थितीहरु आफ्नो अनुकुल त कहाँ पो थिए र ? जब एस.एल.सी. परिक्षा नजिकिन थाल्यो टिउसन पढ्नको लागी भुरिगाउँ जानु पर्ने । घर देखी ४ किलोमिटरको दुरी । अहो निकै गाह्रो लाग्थ्यो त्यो चार किलोमिटरको यात्रा पनी, अझै त्यसमा पनी सदरमुकाम रोड भए पनी कच्ची बाटो, माघ–फाल्गुणको महिना त्यसै त धुलाम्मे सडक झनै हावाको वेग संग संगै उडिदिन्थे ति धुलोहरु पनी । घरबाट धुलाम्मे सडकको केहि दुरी (झण्डै २ किलोमिटर) पार गरे पछी भुरिगाउँ पुग्नका लागी दुई वटा बाटो छुट्टीन्थे एउटा बाटो त्यहि धुलाम्मे सडकको निरन्तरता थियो, अर्को केहि नयाँ धुलाम्मे सडक अनी त्यस पछीको २ किलोमिटरको पिचबाटो, अहो पिचबाटो भनी सके पछी कसलाई पो रहर लाग्दैनथ्यो होला हिँड्न ? केही क्षण पिचबाटो हिँड्न पाईने अपेक्षाले दुरी लामो परे पनी प्राय जसो म त्यहि बाटो हिँड्ने गर्थे । खासै साथीहरु पनी कोहि थिएनन बस एक्लो यात्रा हुन्थ्यो । आफ्नै सुरमा ।
अहँ कुनै बेचैनी थिएन पहिले त्यही बाटो हिँडी रहँदा तर जब तिम्रो घर यहिँ पर्छ भन्ने थाहा भयो अनी हुन थाल्यो छुट्टै अनुभव त्यहि बाटो हिँड्दा । …र त म आफु, आफै भन्दा केही बेसी लाग्न थाल्यो ।
यात्रामा कोही एक्लो हुँदैन, केहि समयका लागी कोही भेटिन्छ अनी अली पर पुगे पछी छुटिन्छ, यस्तै भइ रहन्छ । भेटिएका सबै संग बोल्नै पर्छ र बोलिन्छ भन्ने पनी छैन तर कोहि हुन्छन जस संग थाहै नपाएर मन साट्न पुगिंदो रहेछ ।
जिन्दगी भोग्दै गर्दा, जिन्दगी जिउँदै गर्दा अनुभवहरु अनेकन हुँदै जान्छन । यात्रा बिच गोरेटोहरुमा थुप्रै यात्रीहरु भेटि“दै जान्छन र छुट्टिँदै जान्छन । सुनेको थिएँ यात्रामा कोही एक्लो हुँदैन भनेर र हो पनी यात्रामा कोही एक्लो हुँदैन, केहि समयका लागी कोही भेटिन्छ अनी अली पर पुगे पछी छुटिन्छ, यस्तै भइ रहन्छ । भेटिएका सबै संग बोल्नै पर्छ र बोलिन्छ भन्ने पनी छैन तर कोहि हुन्छन जस संग थाहै नपाएर मन साट्न पुगिंदो रहेछ । हो यस्तै केहि भएको छ मेरो यात्रामा पनी ।
हो म दोस्रो तरिकाबाट सम्बन्ध सकिएको/सकाएको मान्छे । मेरो कारणले तिमीलाई त्यस्तो कुनै पनी समस्याहरु नआओस हरेक समयमा यहि चाहने मान्छे ।
सम्बन्धहरु भनेको निकै नाजुक हुँदा रहेछन । कती खेर कसरी छुट्छ थाहै ह्ुँदैन । पहिलो बोल्न छोड्छ, दोस्रोले बोलाउन छोड्छ कारण पहिलोलाई समस्या नहोस भनेर । केही सम्बन्धहरु यसै सकिन्छन । कहीँ पहिलो बोली रहेको हुन्छ तर दोस्रो बिस्तारै टाढिई दिन्छ । कारण पहिलोलाई समस्या नहोस भनेर । र सम्बन्धहरु सकिन्छन । आखिर दुवै अवस्थामा सम्बन्ध सकिनुको कारण एउटै हो पहिलोलाई समस्या नहोस । तर अवस्था केही फरक छ, हो म दोस्रो तरिकाबाट सम्बन्ध सकिएको/सकाएको मान्छे । मेरो कारणले तिमीलाई त्यस्तो कुनै पनी समस्याहरु नआओस हरेक समयमा यहि चाहने मान्छे । यहि कारणले म तिमीबाट टाढिएको हुँ विस्तारै विस्तारै । निकै सकस परि रह्यो सुरुवाती दिनहरुमा । केहि पनी कुरा भुल्छु भनेर भुल्न कहाँ सजिलो हुँदो रहेछ र ? त्यसमा पनी तिमी त मनको मान्छे पो त ।
अज्ञात पीडाहरुको भारी बोकेर हिँडि रहेको मान्छे म । निकै पर पुगी सकेको छु । एउटा आफ्नै एक्लोपनको साम्राज्य खडा गर्ने सपना बोकेर ।
कसैले भन्थ्यो एउटा केटा र केटी स“धै असल साथी मात्र रहि रहन सक्दैनन, सम्बन्ध अघि बढि रहँदा अनीहरु बिचमा प्रेम नामको टुसा पलाउन थाल्छ अनी राख्छ कोही एउटाले प्रेम प्रस्ताव । जरुरी छैन कि सबैे प्रस्तावहरु स्विकार्य हुन्छन । केही सम्बन्धहरु यसै बिचमा सकिन्छन । केहि सम्बन्धहरुले यसै बिचमा नया“ मोड लिन्छन, अनी कुनै सम्बन्धहरु रहन्छन दोधारमा अलपत्र परेर, जसरी बाटो बिराएका यात्रीहरु रुमल्लिन्छन बाटोमा, जसरी गुँड बिर्सिएको चरी उडि रहन्छ यत्रतत्र ।
यस्तै केहि भयो हाम्रो सम्बन्धमा पनी । कसैले भनेको त्यहि कुरा लागु भयो हामीमा पनी । जब राखियो प्रस्ताब प्रेमको… कुनै एकले चाहेको त्यो नयाँ सम्बन्धको सुरुवात स्विकार्य हुन सकेन दुवैमा र सुरु नहुँदै सकियो त्यो नया“ सम्बन्ध । अलपत्र पर्यो त्यो पुरानो सम्बन्ध, मित्रताको सम्बन्ध । र दोधारमा नै रहि रह्यो ।
म त आफ्नै गतिमा अघि बढि रहको थिएँ । थिएन त्यस्तो कुनै पुग्नै पर्ने गन्तब्य, थिएन हासिल गर्नै पर्ने सफलता पनी । तर पनी थियो एउटा चाहना, थियो अधुरै सपना, थियौ तिमी जसलाई मैलै सजाएर राखेको थिएँ, आफ्नो मानसपटलमा । सम्बन्ध अलपत्र परे पछी धेरै आरोह अबरोहहरु आए, र पनी चलि नै रह्यो यात्रा । तिम्रो साथ बिना, तिम्रो सामिप्यता बिना म रमाउने प्रयास गरि रहे“ । तर कहा“ त्यती सजिलो हुँदो रहेछ र कसैको यादमा रमाई रहन ? यहि समयमा आभाष भयो कति फरक हु“दो रहेछ, की कोही हुनु र नहुनुमा ।
यो माया प्रेम भन्ने कुरा आफुलाई परे पछी मात्र थाहा हुन्छ भन्थे, हो रहेछ । जब पर्यो आफैलाई सहि नसक्नु भो । याद दिए जस्तो कहाँ सजिलो रहेछ र साथ दिनलाई । मुस्कुराएर बिरोध गर्ने तिम्रो बानी रहेछ, म भने त्यसैलाई प्रेम सम्झि रहेँ । म सम्पूर्ण रुपमा तिम्रो सम्झनामा रमाई रहँदा तिमी भने अरु नै कसै संग रमाई रहेकी रहिछ्यौ । जब थाहा भयो तिमी मेरो सपनाको संसारबाट टाढा बन्दै छ्यौ, म आफ्नै सपनाको धरातलबाट भाँसिदै गएँ । मेरो सपनाको साम्राज्य ढल्यो त्यसै समयमा । म एक्लीएँ आफैबाट, म टाढिन चाहेँ आफैले सजाएका सपनाहरुबाट । तर यती सजिलो पनी कहाँ हुँदो रहेछ र ? सपना सजाए जस्तो त्यहि सपनाहरुबाट टाढिन ।
जबजब तिमी र तिम्रो यादहरु बाट म केही टाढा जान खोज्थें, झनझन तिम्रो यादहरुमा म निथ्रुक्कै संग भिज्थें । सजिलो भएन बिर्सिएर बस्न जति सजिलो तिम्रो कल्पनामा रमाउन थियो । र पनी रमाए जस्तो गरि रहें जसोतसो तिम्रो अनुपस्थिती मै, तिम्रो आधार बिना नै । निकै सकसका साथ, निक्कै अभाबहरुमा, निकै दबाबहरुमा । अभाब थियो तिम्रो सामिप्यताको, तिम्रो साथको, दबाब थियो तिमीलाई मात्र साथीको दर्जामा राख्नु पर्ने । तिमी सोंच्न सक्छ्यौ म कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको थिए, कस्तो मोडहरुबाट चिहाई रहेको थिएँ जिन्दगीलाई ।
कसैले भन्यो सम्बन्धमा कहिले काहीँ आँशु भएन भने त माया गर्नुको मिठास पनी कम हुन्छ । हो त्यस्तै महसुस गरें मैले पनी । आज सम्म आई पुग्दा केही पाएँ, केहि गुमाएँ र अझ भनौँ कैयौं बेसी यादहरु सम्हालें यो समयमा, समग्रमा एउटा निकै यादगार पल बन्यो यो समय मेरो लागी । एउटा सुन्दर मिठास । जुन मिठासहरुमा म तिम्रै आकृतीहरुको परिकल्पना गरिरहें तिम्रो साथको कल्पना गरिरहें ।
यात्रा हिँड्दै गर्दा कहिँ कतै एक्लोपनको आभाष भयो भने फर्किएर हेर्नु, अलीअली झिनो आश, अलिकती निरासा लिएर म यतै कतै बसि रहेको हुनेछु । बोलाउनु आफ्नै सम्झिएर ।
कहाँ माथी उडाएकी थियौ, यसरी छोड्नलाई रैछ । छाड्नु नै थियो भने अलिक तलबाट छाडेकी भए हुन्थ्यो, कम दुख्थ्यो । अब त समय पनी निकै अगाडी बढि सकेको छ । अनी तिमी पनी तिम्रो यात्रामा निकै अगाडी पुगी सकेकी छयौ । यात्रा हिँड्दै गर्दा कहिँ कतै एक्लोपनको आभाष भयो भने फर्किएर हेर्नु, अलीअली झिनो आश, अलिकती निरासा लिएर म यतै कतै बसि रहेको हुनेछु । बोलाउनु आफ्नै सम्झिएर । म पलाउनेछु खडेरीले सुकेको विरुवा वर्षात पछी पलाए जस्तै ।